DOWNLOAD CRAZYTALK ANIMATOR PRO 3.1.1607.1 MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
CrazyTalk Animator 3.1.1607.1
Ịmepụta eserese - usoro ogologo ma na-adọrọ mmasị, nke na-ewe ihe karịrị otu ọnwa. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ka eserese na-ekwu okwu, ọ na-ewe oge na mgbalị dị ukwuu nke ọtụtụ ndị. Ị nwere ike ime ka ọrụ gị dị mfe karịa enyemaka nke usoro ntụrụndụ CrazyTalk.
CrazyTalk bụ usoro ntụrụndụ na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ime ka ọ bụrụ "okwu" ọ bụla. Ebumnuche nke a, e mere atụmatụ a iji mepụta ihe ngosi nke na-emetụ egwu nke mkparịta ụka onye mmadụ, ma na-ekpuchi ndetu egwu. Crazy Talk nwere ntakịrị ihe e wuru na ya na nchịkọta ọdịyo.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ maka ịmepụta eserese
Na-arụ ọrụ na oyiyi ahụ
Ị nwere ike bulite foto ọ bụla n'ime CrazyTalk ma mee ya. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ka ị kwadebe foto maka ọrụ a na-eme na mmemme ahụ n'onwe ya. Enwere ike ime nke a na ụzọ abụọ: nkịtị ma dị elu. A na-atụ aro ka ịhọrọ elu, ebe ọ bụ na ihe ahụ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya. Ị nwekwara ike ọ bụghị naanị na-ebugo foto, kama na-ewere foto site na kamera weebụ.
Na vidiyo, ị nwere ike ịchekwa okwu ma ọ bụ egwu. A na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ dị ka bulite foto: dị nnọọ mepee faịlụ ọdịyo dị ma ọ bụ dekọọ ihe ọhụrụ na igwe okwu. Ọzọkwa, usoro ihe omume ahụ n'onwe ya, nyochaa ndekọ ahụ, ga-emepụta ihe ngosi nke ọdịdị ihu.
Ụlọ akwụkwọ ihe
Crazy Talk nwere obere ụlọ akwụkwọ ọ bụla nwere ihe ihu nwere ike ịgbakwunye na ihe oyiyi. Ụlọ akwụkwọ ọhụụ nwere ọ bụghị naanị ihu mmadụ, kama anụ ọhịa. Maka mmewere ọ bụla enwere ọtụtụ ntọala, ya mere, i nwere ike ịgbanwe ya kpam kpam na oyiyi ahụ. E nwekwara ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke ihe ndekọ ọdịyo na ụdị ejiji. Enwere ike ịchọta ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ n'onwe gị.
Site na CrazyTalk, ị nwere ike igbanwe foto 2D site na 10 akụkụ dị iche iche. Naanị ịkwesịrị ịmepụta isi nkuku nke agwa (ihu zuru ezu) ma malite mmemme - usoro ahụ ga-ebunye gị akụkụ 9 ọzọ. Na CrazyTalk, ị nwere ike itinye 3D mmegharị na mkpụrụedemede 2D.
1. Ịdị mfe ma dị mfe nke iji;
2. Ikike iji mechie ọbá akwụkwọ ahụ;
3. Ngwa ngwa na usoro ihe dị ala;
1. Na mbipute ikpe ahụ, ihe ngosi mmiri ahụ dị na vidiyo.
CrazyTalk bụ usoro ntụrụndụ, site na ịtọọ nke ị nwere ike ịmepụta eserese nke ndị enyi gị na ndị enyi ga-eme dị ka ihe odide. Site na idobe foto nke onye, ​​ị nwere ike ịmepụta mkparịta ụka. N'agbanyeghị mmemme nke usoro ihe omume ahụ, a na-ejikarị ya n'ọrụ na ọkachamara. Na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ị nwere ike ibudata usoro ikpe nke usoro ihe omume ahụ mgbe ị debanyere aha.
Download ụdị ikpe nke CrazyTalk
Bido nbudata kachasị ọhụrụ site na saịtị gọọmentị.
Mfe gif animator Onye na-eme ihe ngosi Ọ ga-eme ka udo dịrị Esi edozi njehie na window.dll na-efu
CrazyTalk Animator bụ mmemme maka ịmepụta eserese na ihe nkiri nkiri na-ekwu okwu na atọ.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10
Onye Mmepụta: Reallusion Inc
Ọnụ: $ 133
Achọpụta usoro chọrọ maka ọrụ Anthem
Ime akwukwo aha na akwukwo Microsoft Word.
Ịmepụta foto na ụdị nke Polaroid online
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa ahụ gwụla na usoro mmemme Windows 10
Firmware ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ
Amamihe Care 365 bụ otu n'ime ihe kachasị mma nke ngwanrọ na, site n'enyemaka nke ngwaọrụ ya, ga-enyere aka ịdọrọ usoro ahụ n'ọnọdụ ọrụ. Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ nke onye ọ bụla, e nwere ọrụ ọzọ dị mkpa maka ịmecha ọrụ maka ndị ọrụ na-enweghị uche. Care Care 365 bụ site na nnukwu nnukwu ọkpụkpụ nke oge a nke na-ejikọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndị dị mkpa. GụKwuo
Ntọala ndozi na Photoshop
Esi bulite video VKontakte